परिवर्तनले नछोएको परिवार — JagaranMedia.Com
निगरानी समिति स्थानीय तहसम्म ल्याउनुपर्ने दलित समुदायकाे माग
परिवर्तनले नछोएको परिवार
जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७६/४/१४ गते
रोल्पा- सरकारले ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि भन्दै मासिकरुपमा भत्ता दिने गर्दछ। रोल्पाको एक दलित परिवारमा भने सो भत्ता नै घरव्यवहारको आधार बनेको छ। जिल्ला सदरमुकाम लिवाङका ४५ वर्षीय श्यामलाल सुनारले आफ्ना २ छोराले पाउने पोषणभत्ताले घरव्यवहार चलाउँदै आएका छन्।
५ वर्षीय जेठो छोरा विवेकले ७ सय र ४ वर्षीय कान्छा छोरा विकासले एक हजारका दरले वार्षिक रुपम उक्त भत्ता पाउँछन्। सोही भत्ताबाट श्यामलालले घरमा जडान गरेको विद्युतको बिल तिर्ने गरेका छन्। ‘अनि बचेको पैसाले चामल, तेल खरिद गर्छु,’ श्यामलालले भने।
विद्युतको शुल्क समयमा भुक्तानी नगरे लाइन काटिने भएकाले छोराहरुले पाउने भत्ताबाटै तिर्दै आएको उनले बताए। छोराहरुले पाउँदै आएको भत्ता उनीहरुको पोषण सुधारको लागि हो भन्ने जानकारीसमेत छैन श्यामलाललाई। तर, ५ वर्ष पूरा गरेसँगै उक्त भत्ता रोकिने बारेमा जानकारी पाएपछि भने उनलाई त्यसपछिको दैनिकी कसरी चल्छ भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ।
‘जीवनको आधार बनेको उक्त भत्ता काटिएपछि कसरी घरव्यवहार चलाउने?,’ श्यामलालसँग यो प्रश्नको जवाफ छैन।
सुरु-सुरुमा त घरमा जडान गरिएको पानीको महशुल पनि त्यही भत्ताबाटै तिर्थे उनी। पैसाको बचतकै लागि अचेल उनी पिउने पानीको धाराको लाइन कटाएर छिमेकीको धारामा आश्रित हुन बाध्य छन्। उनले भने, ‘धाराको महसुल तिर्दा दैनिक खानपिनमा पैसा नपुग्ने भयो। अहिले छिमेकीको धाराबाट एक गाग्रो पानी भरेर खान्छौं। त्यही पानीले दिनभर पुर्‍याउनु पर्छ। शौचालय जाने पानी हुँदैन, कपडा धुनको लागि १ घन्टाको हिँडाइमा पुग्न सकिने खोलामा जान्छु।’
जेठो छोरालाई यसै वर्षदेखि विद्यालयसमेत पठाएका छन् उनले। ‘५ वर्ष पूरा भएर पनि स्कुल नपठाएको भन्दै घरमै भन्न आउनुभयो। अनि बालमन्दिरमा लगेर भर्ना गरेको छु,’ श्यामललाले भने। तर, विद्यालयमा न त उनले खाजा खान पाउँछन्, न त घरमा नास्ता बनाएर पठाउने आवश्यक अन्न नै छ। पोषण भत्तावापत रकम पाए पनि विवेकले पढ्न जाँदासमेत त्यसको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्।
यसअघि दुवै छोरालाई कुपोषण भएपछि विभिन्न संस्थाको सहयोगमा दाङमा रहेको पोषण सुधार गृहमा पनि उनले छोराहरुलाई राखे। पोषण सुधार गृहमा बसेको केही समयपछि छोराहरु साथमै लिएर घर फर्किए श्यामलाल। जेठो छोरालाई त ठिक भयो। कान्छो छोराको भने कुपोषणमा सुधार हुन सकेन। अहिले कान्छो छोरा उठ्न, बस्न सक्दैन। उमेर ४ वर्ष पुरा भयो। हातखुट्टा पनि चल्दैनन्। कान्छो छोरालाई दिनभर घर भित्रै थुनेर कामको खोजीमा निस्कन्छन् उनी।
‘काम नखोजे के खाएर बाँच्ने? त्यसैले दिनभर घरमै थुनेर काममा जान्छु,’ श्यामलालले दुःख पोखे, ‘कहिलेकाहीँ त बिहान निस्केको एकैचोटी बेलुका फर्कनुपर्छ। त्यस्तो बेला दिसापिसाबले घेरिएरको हुन्छ।’
घरमा खाने वस्तु नभएकाले कहिलेकाहीं त दिनभर भोक-भोकै बस्नुपर्छ उनको परिवारलाई। ‘कहिले काम मिली पनि हाल्छ, कहिलै धेरै दिनसम्म काम पाइँदैन। यस्तो बेला भोकै बस्नुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन,’ श्यामलालले आफ्नो भोगाइ सुनाए।
श्यामलालको जीवन संघर्ष नयाँ भने होइन। श्यामलाल गर्भमै रहेका बेला बुवाको मृत्यु भयो। आमाको मृत्यु हुँदा श्यामलाल १० वर्षका मात्रै थिए। बुवाआमाको मृत्यु भएपछि उनी एक्लै भए। सानै उमेरदेखि भारत जान थालेका दाजु ओविलालले विवाह गरेर उतै बसेपछि दाजुको सहारा मिल्ला भन्ने आश पनि मर्‍यो।
त्यसपछि उनको जीवन निर्वाहको प्रमुख विकल्प ज्यालामजदूरी नै बन्यो। मजदूरीबाटै साँझबिहानको जोहो गर्दै आएका उनले यसै क्रममा अप्सरासँग विवाह गरे।
उनीहरुबाट एक वर्षको अन्तरालमा दुई छोरा जन्मिए। कान्छो छोरा विकास १ वर्ष नपुग्दै अप्सरा घरबाट निस्किइन्। श्रीमती कहाँ गइन् भनेर निकै खोजतलास गरे श्यामलालले। तर, उनको खोजी निरर्थक बन्यो। अप्सराका बारेमा यथेस्ट जानकारी पाउन सकेनन्। गाउँलेबाट अपुष्ट खबर सुने- अप्सराले अर्कैसँग विवाह गरिसकिन्।
आमाले छोडेर गएपछि नाबालक छोराहरु विवेक र विकासको लालनपालन र हेरचाहको सबै जिम्मेवारी श्यामलालको काँधमा आयो। दिउँसो ज्यालामजदूरी गरेर ल्याएको पैसाले साँझबिहानको छाक टार्थे उनले।
छोराहरुको रेखदेख गर्ने व्यक्ति घरमा नभएकोले आफूले काम गर्ने ठाउँमै लगेर जान्थे उनी। गिट्टी कुट्ने काममा श्याम तल्लिन हुँदा विवेक र विकासको दैनिकी भने धुलोमै बित्थ्यो। तीन बाबुछोराको दिनचर्या लामो समय यस्तै गरी बित्यो।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिए पनि श्यामलालको परिवार यस्ता राज्यबाट प्राप्त हुने यस्ता संवैधानिक अधिकार प्राप्तिको बाटोमा सधैं किनारमा रहन बाध्य छन्।
गरिबीका कारण कुपोषित छोरा विकासको उपचार गराउन सकेका छैनन् भने विवेकलाई विद्यालय पठाउनसमेत धौ-धौ परिरहेको छ। स्वस्थ खानेपानी र सरसफाईको बहस भइरहँदा श्यामलालको परिवारका लागि यसले कुनै आशाको दियो बाल्न सकेको छैन।
अझ भनौं देशमा ठूलै राजनैतिक परिवर्तन भए, तर श्यामलालजस्ता अति विपन्न परिवारका लागि यस्ता परिवर्तनको अर्थ के त? यो प्रश्न श्यामलालजस्ता धेरैको प्रतिनिधि प्रश्न हो। अब उनीहरु यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोजिरहेका छन्।
यो समाचार हामीले नेपाललाइभबाट साभार गरेका हौ ।
नागरिक अधिकार खोस्दै सरकार
मुसहरको प्रश्‍न – यो आवास कि उठिबास ?
अन्तर्जातीय बिहेपछि धोका : पति गायब भएपछि १५ दिने सुत्केरीको बिचल्ली
यी दुई दलित बस्ती, जहाँ छैन स्वास्थ्य सुविधा
जनप्रतिनिधि नै भोग्छन् छुवाछूत
वर्षाैं पहिले राज्यले बिकास निमार्णका काम गर्दा नै नागरिकहरुलाई विभेद गरेको देखिन्छ । जस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग निमार्ण गर्दा दक्षिणी...
शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) को नयाँ नेतृत्व चयन, अध्यक्ष पदमा रोशना खड्का
शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)को केन्द्रिय कार्यसमितिको अध्यक्षमा रोशना खड्का निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । पौष १९ गते चितवनमा आयोजित...
प्रदेश–२ को प्रदेश सभाले ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७५’ पारित गरेको छ । संविधानको धारा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी...
आधा दर्जन विधेयकमा नागरिकको भेला हुन पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत विषयका अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान छन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न...
पौष २४, २०७६
‘हामी नेता होइन, कार्यकर्ता रहेछौँ । प्रतिनिधिसभाको सांसद भएपनि समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्छौ’, सुदुरपश्चिमको बझाङ घर भएकी सांसद आशाकुमारी विक मधुरो बोलीमा...
पाँचौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनामा दलितका सवाललाई समेट्ने प्रतिवद्धता
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले पाँचौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनामा छुटेका दलित सवाललाई सम्बोधन गरिने...
पौष १८, २०७६
Katwal Radio Magazine 2076-9-23
प्रदेश नम्बर २ ले ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐनको महत्व र आवश्यकता